श्रीमती र सम्बन्ध बिच्छेद – भाग ३ – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
श्रीमती र सम्बन्ध बिच्छेद – भाग ३
By डिजिटल खबर Last updated Jan 12, 2020 68 0
झरे पछी झिर झिर गरी असिना
केहि राख्दैन रैछ अनाजका दाना
चल्यो हुरि उडायो खुशी आधिले
आसु सङै मिसिएर बर्शिए पसिना
म उहि दुःखी सरु, हस्पिटलको बसाई र छोरीको पर्खाईले आजित भैसकेको थिए । लगभग प्रकृती र गौरव बाहिर निस्केको पनि दुई घन्टा जस्तै भैसकेको थियोे । मेरो आँखाले उनीहरु आउने बाटो हेर्दा हेर्दै थकाई मार्न खोज्दै थियो । छोरी प्रकृती निरास हुदै हस्पिटलको गेटमा देखा परिन ।
मैले हतार हतारमा नजीक गएर भने नानी गौरव बाबु खोइ त ?
छोरी : जानु भयो उतैबाट घरमा
म : के भन्नुभयो त डाक्टरले ?
छोरी : ममी हाम्रो बाबालाई यो हस्पिटलमा उपचार सम्भव छैन रे,
म : किन रे ?
छोरी बाबालाई उपचारको लागी थुप्रै पैसा लाग्ने भएर उहाँको बोसले केहि समय राखौ यहि त्यसपछि उसको मुत्र्यु हुन्छ मलाई केहि चिन्ता गर्नु पर्दैन बनेर पो याँहा लेराएको रे ।
म अचम्मित भए … हे प्रभु हे ईश्वर मान्छेमा मानवता किन हराउदै गएको छ । सम्झिए ! म एयपोर्ट पुग्दा मेरो बिरामी मलाई हेर्न नै नदिई, एकबचन नसोधी हस्पिटल तिर दगुराउनुको उदेश्य यस्तो पो रहेछ ! मनमनै सम्झिदै आशु झर्न थाले ।
मेरो छोरी प्रक्रुती मेरो लागी छोरी नभएर एउटा असल मित्र थि मेरो लागी उस्ले मलाई अङालोमा लिएर भनी ममी नरुनुहोस …अब जे गर्छु म मेरो ममीको आसु रोकिने र बाबाको आँखा खोल्ने काम गछु, भनी ।
रात पर्दै गयो, हररातमा मलाई रातले ब्युझाएर आफु सुतिरहन्थ्यो, म निन्द्राको आभास गर्न छोडिसकेको थिए, त्यो रात पनि उस्तै खानुन पिनुले हस्पिटलको बास भयो, मैले मेरो छारीलाई सोधे नानु अब के गर्ने, विकल्प केहि छ ?
छोरी : विकल्प बिनाको समस्या हुदैन ममी, छ विकल्प, अब बाबालाई इन्डिया लगेर उपचार गर्ने, आफैले खर्च गरेर ।
सम्पत्तिको नाममा मेरो एउटा नाकमा लगाएको फुलि बाहेक केहि थिएन, घर बनाएको बर्ष उसैत ऋिण, त्येसमाथी बिरामी घरमा ।
मैले छारीलाई दोहो¥याए ! नानु पैसा कसरी मिलाउने त ?
छोरी : ममी जतिसक्दो छिटो बाबालाई उपचार चाहिएको छ त्येसैले हजुरको नाममा भएको घर सहकारीमा राख्ने र पैसा निकाल्ने ।
मैले भने छोरी बैंकमा राख्दा सजिलो होइन र ?
छोरी : ममी बैंकमा प्रोसेस गर्दा ढिलो हुनसक्छ । हामीले त बाबालाई छिटो उपचार गर्नु छ, ममि बाबा बाच्नु भयो भने घरको चिन्ता नगर्नुहोस, म छु हजुरहरुको साथमा भनी छोरील ।
कहिल्यै घर छोडेर बाहिर नहिडेको मान्छे । म छोरी अल्लारे एउटा जिउँदो लाश लिएर इन्डिया पुग्दा के होला मेरो हालत जस्तो लाग्यो र बानेश्वरमा मेरो एकजना फुपुको घर थियोे उहाँको छोरा बिकाश बैंकमा काम ग¥थ्र्यो केहि सहयोग मिल्छकी भनेर उहाँलाई फोन गर्न अनुरोध गरे छोरीलाई तर छोरीले मान्दै मानिन ।
कहिले काही मलाई फुपुले बोलाउनुहुन्थ्यो, म जान्थे, तर उनीहरु अलि उच्च खानदानका हुनाले हामीलाई त्येती वास्ता नगरेको जस्तो लाग्थ्यो । जव छोरी बुझ्ने भै अनि उहाँहरुकोमा जानै दिईन मलाइ । फुपु बुढी हुदै जानु भा थिया । कहिलेकाही फोन गरेर रुनु हुन्थ्यो । आईजो न, तेरो म मेरो त बाहेक को छर भनेर तर मेरो छोरी जहाँ कदर हुदैन त्यहाँ किन जाने ममी भनेर रोक्थी ।
हुननि त्येस्तै थियोे, फुपुको नि कोही थिएन । मैले छोरी जन्माउदा छोरा भएको भए पो भनेर ओठ खुम्च्याउने मेरो फुपुको दुईवटा छोरा मात्र थिए । त्येहीनि कान्छो छोरा अमेरिका थियोे । जेठो यही थियो । मैले अन्तिम चोटी यस्तो मलाई दुःख पर्दा त कसो सहयोग नगर्लान त भनेर फोन गर ।
म : हेलो बिकाश
बिकाश : हजुर दिदि भन्नु त ?
म : बाबु म हस्पिटल छु
बिकाश : के भयो र दिदि ?
म : भिनाजु एक्सिडेन्ट् पर्नु भा
बिकाश : ए पिर नगर्नु ठिक हुन्छ भन्यो र आफै फोन काट्यो मैले केहि भन्न नपाउदै ।
एकैछिन पछि फेरि फोन गर्यो, मैले सोचे अघि बिजि भएर फोन काटेछ क्यारे त्येसैले गर्यो फोन रिशिभ गरे ।
म : हेलो बाबु
बिकाश : अह दिदि सुन्नु त म अहिले बिराटनगर तिर छु, घरमा आमा एक्लै हुनुहुन्छ, उहाँलाई फोन गरेर भिनाजु एक्सिडेन्ट् परेको कुरा नभन्नु ल उहाँलाई प्रेसर, सुगर छ ढल्न सक्नु हुन्छ, त्येसैले ल राखे भनेर फोन राख्यो ।
छोरी रिसले चुर हुदै म पटि हेरि र भन्न थाली अह ग¥र्यो होईन हजुर को फुपुको छोराले खुब ठुलो सहयोग ?
म चुपचाप बसे, भोलिपल्ट आफुले चिनजान गरेको अघि पनि कारोबार गरेको सहकारीमा गएर आफ्नो दुखेसो पोखे र घरको लालपुर्जा राखेर पैसाको चाजोपाजो मिलाउने काम भयो । एकचोटि उहाँको अफिसको बोसलाइ कुरा गरम भनेको भेट भएन फोन बाट कुरा गर्ने जमर्को ग¥र्यै, कुरा गर्दा उहाँले तपाईंहरुले उपचार गर्ने हो भने जहा लग्न सक्नुहुन्छ लैजानुहोस भन्नुभयो र हामीले हाम्रो सल्लाहकारी डाक्टरको सहयोगले उहाँलाई हस्पिटल बाट निकाल्न सफल भयौ र मैले उही डाक्टरलाई रुदै भने अब याहाँ बाट निकाल्न सहयोग गरेपछि कुन हस्पिटल लगेर उपचार गर्ने हो पु¥याईदिनु मेरो लागी बिन्ती छ । यति काम गर्दिनु होला भनेर हामी तिनै जाना ईन्डिया तिर लाग्यौ बिरामी लिएर ।
काम सोचे जस्तै भयो हस्पिटल पु¥याईयो उपचार सुरु भयो, सुरु सुरुमा मलाई त्येहाको भाषा नबुझेर एकदमै गार्हो भयो । अति राम्रो हस्पिटल, बिरामी कुरुवालाई सुबिधा, हस्पिटल भित्रको बाताबरण शान्त ।
मलाई बल्ल अलिअली मनमा आश पलाउन लाग्यो, साकारले अब उपचार पाउनुहुन्छ भनेर । त्यहाको डाक्टरले एकहप्तामा तपाईंको बिरामी बोल्नुहुन्छ भन्नुभएको थियोे मलाई । बस अब त्यो एक हप्ता कहिले बित्छ भन्ने मात्र थियोे । छोरी प्रक्रुती पनि अलि अलि खुशी हुदै थि । एकहप्ता त बित्यो तर साकारको बोलि आएन । उस्ले इसाराले आफनो मान्छे खोज्नु भयो भन्ने खबर आयो ।
अनि हामी आमा छोरी भेट्न गयौ । खासै परिवर्तन त केही भएको थिएन तर आखा चै खाल्नु भएको रहेछ । एकोहोरो हेरिरहनु भयो, छोरी बाबालाई देखेर डाको छोडेर रोइ । एकजना सिस्टरले छोरीलाई समातेर बाहिर ल्याउनु भयो, म हेरेको हेर्यै भए ।
डाक्टरले हुन्छ अब केही दिनमा बोल्नुहुन्छ । विशेष असर ज्यानमा हड्डिमा धेरै भएको छ । उहाँको टाउकोमा मस्तिष्कमा धेरै चोट छैन भन्नुभएको थियोे । सायद चाडै उपचार पाएको भए मेरो साकार बोलिसक्न ुहुन्थ्यो होला, जस्तो लाग्यो मलाई मनमनै ।
हामीलाई सहयोग गर्ने डाक्टरलाई मैले भगवान जस्तै मानेको थिए, उहाँले त्यहीबाट अन्त उपचार गर्नु भन्ने सुझाव नपाएको भए आजसम्म मेरो साकारले उपचार पाउनी रैनछ भन्ने सोचिरहे ।
उता घर राखेर ऋण लिएको छ, कसरी तिर्दै जाने होला अब कुनै बाटो छैन भन्ने चिन्ताले मनमा डेरा जमाईसकेको छ ।
इन्डिया लगेर उपचार गरेको १७ दिनपछि साकार बोल्नु भो रे भनेर हामीलाई भित्र उहाँ भएको ठाँउमा भेट्न जान अनुरोध गरियो, म त खुशीले उत्साहले हो कि के गरौ गरौ जस्तो भएर चिडिचिड पसिना आएर स्वास पनि हतारमा फेरिएको जस्तो भएर काप्न थाले छोरीले डोराएर भित्र लगी ।
साकारले ढोका बाट हामी भित्र पस्नासाथ भन्नुभयो, नानी म बाचे, मेरो छोरी तिमी बाबा बिनाको टुहुरो हुन परेन हेर त म ठिक भए भनेर ।
छोरीले बाबाको सबै अवस्था नियाली सकेकी थि तै पनि आफुलाई समाल्दै बाबालाई भनी
छोरी ः बाबा हजुरलाई ठिक भयो अब झनै पुरा नै निको भय पछि त मेरो बाबा पहिलेको जस्तै हिरो हुनुहुन्छ भनेर बाबाको हातमा समाई ।
मात्र बोलि खुलेको थियो । अह शरीर उठ्ने त कहिले हो कहिले भएको थियो । म केहि बोल्न सकिन तर यति सुन्न मन थियोे कि उहाँले नि सरु भनेर बोलाउनु हुन्छ भन्ने लागेको थियोे । अह किन हो बोलाउनु भएन । डाक्टरले उहाँलाई कालो चिया लेराएर खुवाउने आदेश दिनु भयो । छोरी चिया लिन निस्किन । मैले उहाँलाई त्येही बसेर हेरिरहे उहाँले अलि यता आउन भन्नुभयो । म नजिकै सरेर बसेको मात्र के थिए आफुलाई सम्माल्नै नसकेर रुन पुगेछु । उहाँले हेरिरहनु भयो केही बोल्नु भएन ।
नानिले चिया लेराएर खुवाए पछि उहाँले केहि खाउ जस्तो गर्नु भया । हामीले डाक्टरलाई सोध्यौ अब केहि खुवाउदा हुन्छ भनेर ?
डाक्टर : हुन्छ खुवाउन तर बिरामीलाई खाने कुरा यही हस्पिटलले टाईम हेरेर के खुवाउदा हुन्छ त्यही खुवाउछ । तपाईंहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन । अहिले उहाँलाई कुनै त्यस्तो ठोस कुरा खुवाउन मिल्दैन तर नआत्तिनु उहाँ ठिक हुनुहुन्छ अब भनेर निस्कनु भयो ।
अनि हामीलाई नि मनमा अलि उमङ्ग छाउदै आयो । छोरी मेरो एक मात्रै नजीकको साथी उ पनि अलि खुशी हुदै थि ।
इन्डियामा हस्पिटलको पनि बसाई लगभग ३४ दिन बितिसकेको थियो । त्यही दिन हामीलाई बिशेष हल्प गर्ने डाक्टर र गौरव उही हस्पिटल पुग्नु भएछ हामी अत्यन्तै खुशी भयौ ।
कहिल्यै गौरव सङ्ग नजीक भएर कुरा नगर्ने मेरो छोरीले समेत गौरवको तारिफ गरी र जिस्काएर भनी ।
छोरी : हाम्रो मायाले तपाईंलाई याहाँसम्म डो¥याएर लिएरआयो हैन त ?
गौरव : हो नी !
जसरी आकाश बिनाको धर्ती
नङ बिनाको माशु
ढुङ्गा बिनाको माटो
त्येसैगरी प्रकृती बिनाको गौरव
कहा अलग होला र भनेर उस्ले पनि जवाफ फर्कायो । धेरै नबोल्ने स्वोभावको मान्छे यसरी बोलेको देख्दा म नि दङ्ग परे । छोरी लजालु पाराले बाबाको नजीक ग । केही बोलिन, गौरव सङ्ग ।
भोलीपल्ट साकारलाई हस्पिटल बाट डिस्चार्ज गर्ने दिन थियोे । उहाँको दुबई खुट्टामा पाता राखिएको थियोे । ढाडमा अलिकति समस्या भएर त्यसको औषधी खुवाएको थिया । अरु सब ठिक हुदै थिया । बैसाखिको साहाराले बाहिर भित्र गर्नुहुन्थ्यो । बस्ने बेलामा समाएर बसाउनु पर्ने र उठ्दा उठाउनु पर्ने थियोे । त्यती हुदा नि मलाई उहाँ पुरा ठिक भएको अनुभुती भैरहेको थियोे ।
त्यही दिन उहाँले मेरो मोबाइल मागेर बिहान भरी आफ्ना आफन्त साथीहरूलाई फोन गरेर आफु ठिक भएको जानकारी गराउनु भया । उहाँको साथीहरू कुराकानी यस्तो थीयो, जवाफमा …
ArtialDigital KhabarNepalNewsSaru BajgaiWriter
नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेवा–ताम्सालिङ प्रदेश समितिद्वारा भोलि (पुस २८) गते प्रदेशस्तरीय हड्तालको घोषणा
कलाकारिता क्षेत्रमा रमाउदै सुजता भट्टराई उर्फ “सुजु”
यँही हो आखिर सत्यता
सेनाका यि क्याप्टेन जग्गा देखि केटी दलालसम्म, पुरा नालीबेली
मातृभुमि संरक्षण नेपाल मनायो राजा विरेन्द्रकाे जन्मजयन्ती
“आउ भाइ घरमै बसौ”